WAA MAXAY SAAMAXA: MABAADI'DA AASAASIGA AH IYO TAARIIKHDA MUUQAALKA - INFRASTRUCTURE
Cimilada jardiinooyinka intooda badani isbeddel maayaan sanadaha - dalag kasta wuxuu leeyahay meelo gaar ah, taas oo aan dhaqdhaqaaqi karin. Tiknoolojiyada beeraha noocan oo kale ah waxay keenaysaa wax-soo-saarka xasilloon, laakiin ma tixgelinayo xaqiiqda ah in halabuurka ciidda ay isbeddeli karaan, iyo dhirta waa in la beddelo, iyaga oo ku dhejinaya "bam". Kuwa raba inay dalagaan dalag ballaadhan, isku day inaad farsamooyin cusub u noqoto beeraha dacha. Wax badan ayaan ka baraneynaa mid ka mid ah wajiyooyinkan, iyagoo tixgeliyey waxa la isa siiyay, sida loo fuliyo jihadaas.
Habkani wuxuu ka kooban yahay qorshaynta goob ku saleysan nidaamyada dabiiciga ah. Hadafkiisu waa inuu abuuro nidaam isku dheelitiran, mid kasta oo ka mid ah waxyaabaha astaamaha la xiriira. Door muhiim ah ayaa loo xilsaaray fiirinta, natiijooyinka kuwaas oo soo jeedinaya isbedelka habka caadiga ah. Haa, waxay u egtahay nooc ka mid ah falsafada. Haddii ay sahlan tahay in la yidhaahdo, ka dibna fasaxa dhirta beerta ama beerta, doorka dhismaha midabkiisu ka kooban yahay dhirta ugu haboon waxaa lagu magacaabaa. Iyaga iyaga, raacayaasha habkan ayaa sidoo kale ku daraya xayawaan iyo dhismayaal kala duwan. Dhammaantoodna waa inaysan faragelinin asxaabta, laakiin, si kastaba ha ahaatee, dhammaystir.
Waa muhiim! Waxay noqon lahayd mid waxtar leh si loo ogaado kiimikada ee ciidda. Waxaa jira hab sahlan: gelinta muraayadda dusha mugdi ah, ku shub 1 tsp on it. carrada, si khafiif ah u waraabiyo ilaa 9% khal. Ciidda carradu ma siin doonto xumbo, halka ciidda alkaliin ay soo saari doonto hodan iyo qaro weyn "cap".
Qaabdhismeedka dariiqadani waa fahamka xaaladaha deegaanka iyo astaamaha beerta laftiisa. Taasi waa, dhammaan qodobada la tixgeliyaa - tirada maalmaha qoraxda iyo roobabka, muddada xagaaga, joogitaanka iyo caadooyinka xoolaha.
Xusuuso oo diiradda saaro isticmaalka biomerial - dhammaan noocyada kiimikada ayaa laga reebay.
Fikradda dhaqdhaqaaqa joogtada ah ee beeraha ee ku hawlan nafaqeeyayaalka iyo Faa'idoyinka horraantii qarnigii labaatanaad. Waxay ahayd markaa su'aasha ah in laga tago beeritaanka ayaa la kiciyay, taas oo soo jiidatay taageerayaal yar. Waxay ku doodeen in sida beerista noocaan oo kale ah sida haboon ay u horseedi doonto muuqaalka muuqaalka lamadegaanka ee goobta beeraha bacrin ah.
Ma taqaanaa? Mid ka mid ah cirifka ugu horeeya wuxuu ku soo noqdaa 1968 Acroville. Waqtigan xaadirka ah, qiyaastii 1,200 oo qof oo ah 30 wadan ayaa ku nool "City of Dawn".
Mucjisadu waxay ahayd sannadkii 1960-1970. Waqtigaas, xawaaraha qulqulaya, iyo sidoo kale isticmaalka herbicides ayaa gaadhay heerka ugu sareeya. Mudaaharaad ayaa laga sameeyay falanqeeyayaal fara badan, oo bilaabay inuu soo nooleeyo mabaadii la iloobay ee beerashada joogtada ah iyo horumarinta nidaam deggan.
Mabaadii ugu horeysay ee beeraha beeraha ah ee beeraha ayaa waxaa soo saaray beeraley reer Japan ah iyo maasiyoolojiste Masanobu Fakuoka. Buuggan "Revolution of Straw" (1975), wuxuu soo koobay waayo-aragnimadiisa - wakhtigaas, qoraagu kuma dhicin dhulkiisa mudo 25 sano ah. Shaqadani waxaa loo tixgeliyaa aasaas u ah jihada oo dhan. Sannadkii 1978, mugga koowaad ee buuggan "Permaculture" ayaa la daabacay, qorayaasha kuwaas oo ahaa Australiyaanka David Holmgren iyo Bill Mollison. Daabacaaddu waxay heshay jawaab ballaaran, horeyba 80-kii degmo ee ugu horeeyay ee deegaanka ayaa muuqday - fikradda ayaa ka baxday qaabka beeraha waxayna bilaabeen inay taabtaan arrimaha naqshadeynta iyo dhismaha.
Shaqooyin cusub oo ku saabsan arrinta "eco-processing" ayaa si joogto ah u muuqda. Permakulture oo ku salaysan waayo aragnimada Sepp Holzer waa mid aad u caan ah oo degmadeena ah. Beerta Australiyaanka ah ayaa markii ugu horreysay soo jiidatay carrada "culus" iyo nadaafada guryaha xaaladaha cimilada xun, oo qoraya dhowr buug.
Baro sida loo qorsheeyo sawirka, sida loo qiyaaso sawirka dacha, sida loo dhiso madoow, sida loo sameeyo dhagaxyo iyo qulqulo qallalan, sida loo sameeyo waraaqo si loo siiyo, sida loo abuuro beerta.
Haatan waxaynu ogaannaa sida aragtida aragtidaasi u dhaqanto, mabaadiida "agro-waxbarasho" ayaa saldhig u ah. Ogsoonow in qof leh aragti dhaqameed ee beerta sida postulates iyo farsamooyinka ay u muuqdaan wax aan caadi ahayn, laakiin waxaa jira hadhuudh firfircoon iyaga.
Nidaamka deegaanka ee balaadhan
Doorka ugu weyn waxaa lagu ciyaari karaa isdhexgalka sahlan ee qaybaha oo dhan. Permakulture waxay ku tiirsan tahay:
Isku-dhafka ugu wax-soo-saar leh ee dhammaan walxaha. Tusaale fudud ayaa ah qaabka digaagga. Waa in la dhigaa meel u dhow sariiraha leh khudaarta. Natiijo ahaan, caws iyo qaybo ka mid ah dhirta ayaa tagi doona shimbiraha, iyo qashinka ay soo saareen waxaa loo isticmaalaa bacriminta.
Mabda'a kala duwanaansha dabiiciga ah - dhammaan walxuhu waxay isku xirxiraan midba midka kale, lana wadaagin.
Multifunctional. Haddii aan qaadanno geedo geedo ah, markaa waxay noqon doonaan kaliya ma shidaal, laakiin sidoo kale mulch, oo lagu kobciyo ciidda leh nitrogen.
Qorsho wanaagsan, waa lagama maarmaan in la ogaado dhammaan sifooyinka farsamada ee qayba gaar ah - sida badan iyo sida loo bacrimiyey ka hor, kuwaas oo noocyo la beeray, waxa cimiladu u egtahay iyo wixii la mid ah.
Isticmaalka qumman ee tamarta qorraxda (sidaa daraadeed waxaa jira goobo badan oo lagu koriyo oo ku yaalla goobahaas) iyo biyaha roobka oo la yareeyo khasaaraha ugu yar. Waa inaan ka fekernaa meesha ay ku yaalaan bakhaarada waawayn iyo gawaarida waaweyn.
Waa muhiim! Istaraatiijiyadda beerashada joogtada ah ma bixiso xilliga dayrta ee caleemaha, iyo weliba, gubasho.
Sida aad arki karto, permaculture waa mid aan la ilaawi karin iyada oo aan la isku darin khayraadka jira, oo ay ku jiraan kuwa dabiiciga ah.
Isticmaal khayraad dabiici ah
Dabcan, waa inay ahaataa mid wax ku ool ah. Koorsadani waa khayraadka la cusboonaysiin karo oo keliya. Siyaabo badan, tani waxay sharraxeysaa sababta ay caynkaas oo kale u yihiin caleemo iyo caws.
Ma taqaanaa? Wakhti dheer, Shabakadda Adduunka ee Ecosettlement ayaa shaqeynaysay, oo leh xafiisyo goboleedyada Yurub, Aasiya iyo Ameerika. Waxaa jiri kara ururo qaran, iyo qaar ka mid ah degsiimooyinka waaweyn.
Geeduhu wuxuu siinayaa dalagyada, siinaya hooska xagaaga kulul iyo nadiifinta hawada. Shaybaarka hore ama jirrada waxaa loo isticmaalaa sida wax soo saarka kuraasta iyo walxaha kale. Markaad ku bilowdid mulch, waxaadna kor u qaadaysaa isbeddelka ciidda.
Tani waxay saameyn ku leedahay cawska sii kordhaya ee soo socda - waxaa loo yaqaan 'effect-bound'. Waxaa jira tusaalooyin badan oo badan. Noocyada aan la cusboonaysiin karin ee alaabta ceeriin ahi waxay isku dayaan inayan isticmaalin ama yareynin isticmaalkooda ugu yar. Masalan isku mid ah, tusaale ahaan, waxaa lagu qaadaa xaalado adag.
Wax walba waa wax sahlan - wax kasta oo dib loo isticmaali karo waa la isticmaali karaa. Cawska, caleemaha, waraaqaha, nadiifinta jikada ayaa ka bilaabaysa ganacsi "cusub", laakiin waa nooc kale oo jidhka ah. Tani waa nidaam waqti gaaban, laakiin natiijadu waxay noqon doontaa meel nadiif ah oo aan qashin "jasiiradaha."
Intaa waxaa dheer, in badan oo qashinka lagu heley xilliga xagaaga ayaa lagu keydin karaa god qallalan, halkaas oo lagu baari doono gooryaanka iyo waqti ka dib waxaa loo isticmaali doonaa bacriminta sariiraha. Tani waa sida mabda 'kale loo hirgaliyo, sida isticmaalka wareegga dabiiciga ah.
Ha ilaawin kiisaska aadka u adag. Goobaha loo yaqaan "ecovillages" waxay soo saaraan qalab dhamaystiran oo baaba'ay, taas oo aan dib loo hagaajin.
Naqshadeynta goobta iyo aagagga
Naqshaduhu waa inay isku daraan quruxda iyo waxqabadka, iyo habka dhaqan ahaaneed ee arrimahan la xidhiidha ma aha mid ka reeban. Qorsheynta qorshaysan sida habka loo tirtiro dhaqdhaqaaq aan loo baahnayn, taas oo fududeynaysa shaqada. Way ku habboon tahay, gaar ahaan meelaha waaweyn.
Waa muhiim! Isku darka geedaha iyo cawska ayaa loo tixgeliyaa khasab. Waxaa la sheegi karaa in jardiinooyinka Japan ay yihiin kuwo ku habboon marka la eego.
Beerta oo dhan waa mid si siman loo qaybiyey shan aag, taas oo ka duwan inta jeer ee booqashooyinka. Halkan waxaa ah:
Jannada iyo digaag (1 iyo 2) guriga dhexdiisa. Shaqooyinka badankood waxaa lagu qabtaa halkan. Greens waxaa lagu beeray xuduudkeeda, taas oo loo isticmaali karo in lagu quudiyo digaagga.
On "xudduudaha" ee 2 iyo 3 aagagga, dhirta beerta waxaa lagu beeray, kuwaas oo lagu beddelay "warshadaha" warshadaha, siinaya cunto iyo qalab.
Daaqa loogu talagalay xoolaha (aagagga 4) ayaa loo qaaday "xayndaabka."
Aagga 5 marmar waa la booqday. Kuwani waa beeraha ku yaal meel u dhow kaymaha u dhow.
Halkaan waxaa ka muuqda mid ka mid ah waxyaabahan oo ah beeraha - waxaa loogu talagalay bulshooyinka waaweyn oo leh dhulal ballaadhan.
Milkiilaha gaarka ah ee 6 acres maaha halis noocaas oo kale ah, inkasta oo uu, haddii uu rabo, wuxuu keeni karaa xero sare ilaa heerka dabiiciga ah ee dabiiciga ah.
Waxa ugu muhiimsan - si loo xisaabiyo dhammaan sifooyinka carrada iyo meesha dhismayaasha.
Markaa waxaad qalabayn kartaa dhulka guriga, beeraha sariirta iyo beerta si waafaqsan dhammaan mabaadi'da fasaxa.
Dhismaha alaabta dabiiciga ah
Waxaan hore u ogaanay inaan u baahanahay oo kaliya khayraadka dabiiciga ah, iyo meesha ugu horeysa - qoryo. Waxay noqon doontaa aasaaska dhismaha guri, daadi ama isku xidho. Iyada oo dhismo badani ay ku jiraan geedo. Inta badan waa jiiska cagaaran. Waxay leedahay faa'iidooyin badan, oo ka mid ah baahsanaanta iyo kharashka hooseeya.
Iyadoo la jimciyo xoogaa adag - qoryaha ayaa ka badan friable, inkasta oo ay kuleylka u fiican tahay. Iyo ugu fiican ee fursadaha la heli karo noqon doonaa larch, kaas oo ah mid adag. Wixii dheeraadka ah ee dheeraadka ah qashinka ku rid, adoo badalaya dhogor dhalada.
Ma taqaanaa? Mid ka mid ah noocyada ugu muhiimsan bulshada ee ku yaala Ruushka wuxuu ahaa tuulada Kitezh, oo bilowday in la dego 1992. Wadajir ahaan isaga oo ku jira mugdi hore ee 90kii hore waa Tiberkul, Grishino iyo Nevoekovil.
Goobta waxaa laga heli karaa iyo walxo kale, markaad dhigayso taas oo isku day inaad ka fogaato isticmaalka qalabka synthetic. Tani waxay khusaysaa ugu horeyn balliyada. Fikrad ahaan, waa inay ahaadaan ciidda, iyada oo aan la taaban karo "mid" iyo daboolka filimka.
Farsamooyinka ugu wayn ee xeeldheer ee keena doodda kulul. Waxay tusinaysaa diidmada wax kasta oo soo noqnoqonaya iyo dabacsanaanta ciidda, iyada oo aan loo eegin sida - shidaal ama xaaqin.
Faa'iidooyinka habkani waxay u arkaan inay fursad u tahay soo celinta dheelitirka ciidda, taas oo aan macquul aheyn habka dhaqameedka. Waxay leeyihiin doodo macquul ah, oo ay ku jirto xaqiiqda ah in waqti ka dib, dabacsanaanta dabiiciga ah ee ciidda ayaa la hagaajiyaa iyada oo loo marayo hawsha qadhaadhka.
Ku dar halkan dhibaatada cagaarka, taas oo ugu dambeyntii la waayo - faa'iidooyinka farsamadani waa muuqan doonaan.
Tani waa run, laakiin waxay qaadan doontaa in ka badan hal sano si ay u hesho dheelitirka saxda ah, taas oo niyad-jebisa dad badan. Inkasta oo dabiiciga ah (taas oo ah, qoys yar) dhaqaale, isbeddellada xagjirnimada sida badanaa aan la qiyaasi karin - wax-soosaarku waa isku mid. Laakiin kakanaanta sii kordheysa si tartiib tartiib ah, taas oo sidoo kale ah oo lagu daray.
Waxaa loo adeegsadaa si aad u ballaaran.
First of dhan, waa walax aad u fiican ee mulch. Waxay dhufaneysaa si dhakhso ah, si aad u jiifsato lakabka qaro weyn. Qoyaanka iyo oksijiinka isla markaaba waxay u gudbaan dhulka aan dhib lahayn. Xilliga xagaaga, waxay ku ridaan khudradda cagaaran ama sariirood, iyo xilliga qaboobaha waxay daboolaan gooyooyinka geedaha ee geedaha iyo geedaha.
Straw waxaa sidoo kale loo isticmaalaa beeritaanka baradhada, ee loogu talagalay champignons, lafaha caws iyo bacriminta.
Intaa waxaa dheer, cawsku wuxuu sidoo kale u adeegaa sida "dhismaha dhismaha" sariiraha qudaarta. Sameey sidan:
Qaado bacaha laga soo goostay xagaaga iyada oo aan qashinka laga reebin (miraha haramaha ayaa ku jiri kara).
Xilliga dayrta, waxay ku xidhan yihiin baalal labeen ama khafiif ah oo la dhigo safafka, oo leh dhexdhexaad ah 55-70 cm.
Straw ayaa si ballaaran loo waraabiyaa shimbir shimbireed, ilaalinta qoyaanka ilaa barafka ugu horeeya.
Guga (qiyaastii dhowr toddobaad ka hor intaan la beeri), baalal ayaa la waraabiyaa oo la isku dardarey qoryo qoryo ah, cunto lafo ama qashin, isku qasan qaybo siman.
Ka hor intaan la beeri, ceelasha ayaa la sameeyaa, mararka qaarkoodna waxay ku daraan cantoobo yar oo dhulka ah si ay u fiicnaadaan. Seeds ama geedo la rusheeyey lakabka yar.
Wali waa la waraabiyaa wakhtiga iyo, haddii loo baahdo, si aad ugu dhejiso dhadhanka noocyada fuulitaanka.
Ka dib goosashada cawsku waa la jarjarayaa, waxaa laga tagi karaa mulch ama loo diraa god qolfaad.
Waa muhiim! Habkani waxa uu ku kala duwan yahay dabacsanaanta wareegga dalagga - "Halabuurka" ee warshadaha, haddii loo baahdo, isla markiiba isbeddelo, iyada oo aan wax dhibaato ah gaarin. Dhimashada noocyo kala duwan ayaa magdhow laga siiyay rabshadaha guud ee goobta.
Sidee loo bilaabaa newbie?
Ku raaxeysta baraarujinta, qaar badan ayaa ka fikiraya isticmaalka ka soo xoqista.
Wakhti hore u sheeg - samir samir wanaag.
Tani waxay sabab u tahay xaqiiqda ah in ay lagama maarmaan tahay in si wayn loo baddalo ma aha oo kaliya qaabka beeraha.
Mid ka mid ah diidmada qulqulaya halkan ma sameyn doono, waxaad u baahan tahay inaad si fiican u diyaariso goobta lafteeda. Agrotehnika "sida Holzer" ayaa loo yareeyey isticmaalka bannaanka dheeraadka ah iyo sariiraha qaabka adag (badanaaba xawli). Tijaabi haddii aad qalabayn kartid beer yar.
Si loo qiyaaso awooddaada, u fiirso qodobbada soo socda:
Xitaa ka hor inta aanad u wareegin farsamo cusub, fiiri dachas deriska ah - waxa dhabta ah ee sii kordhaya, iyo noocyo la aqbalo rabitaanka. Ka taxadar qaababka nooca "xaafad" inta u dhaxaysa noocyo kala duwan ayaa ah kuwa ugu badan. Tani waxay kuu ogolaaneysaa inaad doorato qalabka saxda ah ee beerto.
Ka fikir faahfaahinta qaabka mustaqbalka ee la tixraaco xaaladaha gaarka ah (aagga, gargaarka, meelaha dhismaha iyo dheecaan).
Ha ka baqin kala duwanaanta kala duwan ee ka soocaya nidaamka deegaanka. Tani waa wax aan caadi ahayn, sababtoo ah inta badan dhirta dhaqan ahaan loogu talagalay deegaannada deegaanka ayaa loo arkaa caws.
Si taxadar leh u xisaabi dhammaan fursadaha biyaha, adigoo fiiro gaaraya ugu yaraan aafada dareeraha. Isla sidaas oo kale kuleylka.
Haddii ay jiraan digaagga ama lo'da, saxee meesha sariiraha loogu talagalay. Sidaas awgeed way fududahay in la daboolo bacriminta soo baxay.
Ma taqaanaa? Beeraha fanka-dhaqameedka ah ayaa si tartiib tartiib ah ugu sarreeya guryaha hantida qoysaska, oo bixiya dakhliga wanaagsan. Isbeddelkan ayaa la arkay 15kii sano ee la soo dhaafay.
Ka hor inta aanad hirgelin hirgelinta dhammaan mabaadii'da kor ku xusan, ka fikir mar kale in ay tahay mid u qalantaa in ay qaadato shaqadan dhib badan. Tani waa lagama maarmaan in la tixgeliyo dhammaan khilaafaadka iyo khasaarooyinka go'aankaas.
Taageerayaasha fikradda "qadarin ku haboon" ayaa soo bandhigay muranada noocaas ah:
helitaanka bii'ada jawiga bey'adeed;
yaraynta loadogen technologyic dhulka;
ku dhowaad dhammaystirto "is-xukun-hoosaad" ee ciidda, taas oo u oggolaanaysa waqti dheer in la sameeyo iyada oo aan bacrinimo badan;
wax qashin ah, wax waliba waa ganacsi.
shaqeyn xoogaa yar;
wax-soo-saarka wanaagsan iyo mid deggan;
Kharashka ugu yar ee daryeesha dhirta.
Ugu dambeyntii, waa mid aad u qurux badan.
Waa muhiim! Hirgelinta habka noocaas oo kale ah waxay ku fiican tahay aagga si fiican loo ilaaliyo, taas oo ka reeban muuqaalka martida aan la socon.
Laakiin waxaa jira aragtiyo kale. Dad badan ayaa aaminsan in isticmaalka wax ku oolka ah ee nadiifka ah "nadiif" ee xaaladdeenna ay saameyn xun ku yeelan karto beerta. Waxa ka mid ah dooddooda, kuwa ugu caansan waa:
kakanaanta ku-meel-gaadhka ah ee ku-meel-gaadhka ah qaab cusub oo ku yaalla "yaryar";
xoojinta xoogga shaqaalaha marka hore;
muddo dheer sugaya goosashada mug leh;
awood la'aanta noocyo farabadan si ay u dheeraadaan qabow iyo dhaxan hore;
baahida loo qabo joogitaanka joogtada ah ee waddanka, oo aan had iyo goor dhab aheyn.
Si aad u isticmaasho waxyaabahan oo dhan ama aan ahayn ma aha arrin dhadhan, laakiin fursadaha. Waxaa jira hal dheeri, oo maskaxiyan ah. Haddii aad weli go'aansato inaad sameysato "kaynta" dhexda iskaashatada dacha, iskuday inaad u sharaxdo deriskaaga in dhirta cagaaran ee aan cagaarka ahayn.
Tani waxay ka hortagi doontaa isku dhacyada suurtogalka ah.
Waxaad baratay farqiga u dhexeeya cagaarka cagaaran iyo beeraha dhaqanka.
Waxaan rajeyneynaa in xogtani ay cadeyn doonto oo ay caawineyso in la go'aamiyo nooca ugu haboon ee guriga. Waxsoosaarro badan iyo rikoodh.